NSA: Family Day out
M ဖေဖေနဲ့ သားတို့ သမီးတို့ ပိတ်ရက်ချင်းမတူလေတော့ အပတ်စဉ် ဖေဖေညနေအားတဲ့ တနလာင်္နေ့ညနေတွေ ကလေးတို့ ကျောင်းဆင်းချိန် အပြင်လိုက်ပို့ဖြစ်တယ်။ ဒီတပတ်သွားတာ Vivo City ကို...။ မရောက်တာကြာတော့ ကလေးကစားဖို့နေရာတွေ အသစ်ပြန်ပြင်ထားတာ မသိလိုက်ဘူး..။
Posted by NSA at 11:39 PM
NSA ကိုလွမ်းလို့ :P
Jul 5, 2017, 8:23:00 PM
မဟာပုဂံမှ လွင့်စင်ပဲ့ကြွေလာသော အပိုင်းအစများဆီသို့
Any clue? Who got this invite? 😂
မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ ဒုတိယရဲခြုပျ(၁) ရဲဗိုလျခြုပျ မြိုးဆှဝေငျး ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ သနေတျပဈအဖှဲ့၊ တရုတျနိုငျငံ၊ ကှမျကြိုးမွို့တှငျကငျြးပပွုလုပျသော THE2nd USIP WORLD POLICE SERVICE PISTOL SHOOTING CHAMPIONSHIP (2018) သို့ သှားရောကျယှဉျပွ